Ngamaphi amaphupho ama-utamatisi ezihlahleni ensimini: incwadi yokuphupha. Uthini utamatisi obomvu noma obuluhlaza obukeka ngathi?
Kuyini iphupho lika utamatisi? Ukuhunyushwa kwezincwadi zamaphupho adumile
Kungenakwenzeka ukuthola umuntu ongafuni utamatisi. Okusha noma okusemathinini, okusawoti - kuyisithako esiyinhloko sanoma iyiphi idili. Akumangalisi ukuthi singababona njalo ephusheni. Lokho okushiwo la maphupho, ukuthi yini i-tomato ephuphayo, sizocubungula phambili.
Yini utamatisi engadini noma etafuleni kubonakala sengathi?
Kungani uphupha ukuqoqa utamatisi ensimini? Konke kuncike kumbala wabo: obomvu obuvuthiwe - ukukhokha umvuzo, ophuzi - ukuqashelwa kwendawo yonke, kanye nesithembiso se-pink ngokuguqula okungaqondakali ku-destiny. Uma uphupha utamatisi oluhlaza emahlathini, uzovakashela imibono entsha yokudala. Ukuvuna ephusheni kuyinto engumngane omusha ongaziwa. Uma utamatisi edonswa bese elala emhlabathini, linda ithuba lokuphinda uqale ubudlelwane bokuqala.
Uma uphupha utamatisi elele ekhishini etafuleni, izivakashi ezingalindelekile zizokuza kuwe. Inqubo yokudala isaladi kusuka utamatisi - kumangala. Utamatisi oqoshiwe ukuze ubone empilweni - usongo ukuze uthole ukuhlambalaza.
Kungani uphupha ukweba utamatisi? Uma ungumlenze ephusheni, kusho ukuthi ufuna ukuhlala wedwa okwesikhashana. Futhi uma ubona ukuthi omunye umuntu uthatha kanjani, umcebo ulindele wena.
Utamatisi ngamathini: incazelo yokulala
Uma utamatisi utamatisi ephusheni, umsebenzi wakho awuhambisani nawe. Ukubona utamatisi owodwa omuncu - ukuze uthole ithuba lokuthola imali ekhululekile. Ukubona isidlo etafuleni lokugubha isisindo sesithokozo sothando. Kukhona utamatisi omuncu obomvu kakhulu - uphawu lokushintshashintsha kwangaphakathi, ukuwaphatha komunye umuntu - ulindelwe ngomzwelo omusha.
Uma utamatisi okwenziwe okwenziwe ekwenzeni, lindela ukwazi okuthembisayo. Kulesi simo, ibhange elivulekile lisho ukuthi kuzokwenzeka maduzane, futhi kuvaliwe - okudingeka ulinde. Utamatisi ekheniwe, ewela phansi, uphawu lokuthi ufuna okungenakwenzeka empeleni. Uma uzikhipha etafuleni ephusheni, empilweni yonke into ekhulelwe iyaqaphela. Uma uphupha ukuthi uphatha utamatisi ezivela emabhange wezihlobo - uzothola isivumelwano nabaphathi. Ukuthenga umkhiqizo onjalo uthembisa iqembu elijabulisayo.
Uma uphupha utamatisi ochotshoziwe esandleni sakho, uzothola inzuzo enenzuzo. Faka etafuleni ipuleti enezimila - isipho, futhi usihlanze esiqandisini - ukumangala okumangalisayo kumbono wemfihlo.
Njengoba ungabona, incazelo yokulala ixhomeke ezintweni ezincane ezincane. Ngakho-ke, uma udinga ukwazi ukuthi yimaphi amaphupho ama-utamatisi, kubalulekile ukukhumbula yonke imininingwane yokulala.
Funda futhi ukuhumusha amaphupho ngamakhukhamba ashukile .
Ingane iyafa: ingabe ukuhumusha kwephupho kuyethusa?
Ukuze ubone izicathulo ephusheni, kusho ukuthini lokhu?
Iyini ingubo ende ebonakalayo?
Ukuhumusha iphupho: incazelo yamaphupho ngemvula
Ingabe kuzoba nezinguquko empilweni uma izinwele ziphupha?
Lezinyo lidiliza: kanjani ukuchazwa kwephupho kuzokwenzeka kanjani?
Yini izingane eziphuphayo?
Ukuchazwa kwamaphupho: Kungani iphupho lengwenya
I-Biography ye-Lady Gaga
Izinto eziyishumi abantu bonke abesabayo
Ukuxabana kuyisenzakalo socansi
Ukusetshenziswa kwamanzi okugeza
U-Irina Sheik esemncane wabuthana utamatisi futhi wapenda esibhedlela
Isitshalo seqanda somile
Indlela yokugeza i-henna kusuka ezintweni
Indlela yokwenza i-tattoo yesikhashana ekhaya?
Ukuzalwa kusengaphambili: usongo, ukwelashwa
Izinga lomphumela wezithasiselo zokudla E ngomuntu ngamunye
Egwini likaHellas: isitayela sesiGreki esingaphakathi
Yini isithombe sephrofayela "Oxhumana naye" esingasho ngomuntu?
Abezindaba bezinye izizwe bathola imfihlo eyinhloko kaVladimir Putin
Ukuthuthukisa izindawo noma ukutadisha ekhaya nomama?
I-Barbecue ye-Barbecue e-Homemade evela ku-utamatisi